लुइस भिल्लान। एल सिलो सोब्रु एलेजेन्ड्रोको लेखकसँग अन्तर्वार्ता | वर्तमान साहित्य
लुइस भिल्लान। एल सिलो सोब्रु एलेजेन्ड्रोको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला
फोटोग्राफी। लुइस भिल्लान। फेसबुक प्रोफाइल।
लुइस भिल्लान, cel from बाट बार्सिलोनाका, धेरैका लेखक हुन् पूर्वाभ्यास जस्तै पुरानो ग्रीस को बारे मा ट्रोजन युद्ध वा संसारको अन्त मा अलेक्ज्याण्डर। २०० In मा उनले प्रकाशित गरे हेलेनिकॉन, काम कि पुरस्कार जीते हिस्लिब्रिस एक ऐतिहासिक उपन्यासको सर्वश्रेष्ठ नयाँ लेखकलाई। अन्तिम पोष्ट गरिएको हो अलेक्ज्याण्डर माथि आकाश, भर्खरै Hislibris पुरस्कार को लागी एक फाइनलिस्ट को रूपमा चयन गरिएको, र यो मा साक्षात्कार उसले हामीलाई यसको बारेमा र अन्य धेरै विषयमा बताउँछ। म तपाईंको समय र दयालु व्यवहारको कदर गर्छु.
लुइस भिल्लानसँग अन्तर्वार्ता
लुइस VILLALÓN: पहिलो ठीक, होईन। मलाई लाग्छ यो केहि कलेज वा उच्च विद्यालय पढाइ हो: माओ सिड द्वारा कविता, ला सेलेस्टीना..., ती मध्ये एक हुनुपर्‍यो। रमाईलोको लागि पढेर, त्यो हो, स्कूल वा कसैको लागू बिना, मलाई याद छ उदाहरणको लागि जग्गा, त्यो अत्यधिक बिक्री भएको एलेक्स हेली द्वारा यो धेरै वर्ष अघि फेसनशील भयो र जसमा उनीहरूले एक श्रृंखला पनि पुस्तक भन्दा बढी प्रसिद्ध बनाए। मलाई पनि याद छ निलो सीमा, जसमा टेलिभिजन श्रृंखला पनि थियो। मलाई थाहा छैन तिनीहरू पहिलो थिए कि थिएनन्, तर तिनीहरू त्यहाँ हुनेछन्।
मैले लेखेको पहिलो कथा? जब म ईजीबीको छैटौं वर्षमा थिएँ मैले लेखें (मैले तानें, बरु)aएक सुपर हीरो को विभिन्न कथाहरु संग हास्य जुन मैले बनाएको छु। कमिकको पनि रुचि, कथाहरू र विभिन्न बकवासहरू थिए; मैले यसलाई एउटा आवरण बनाएँ र पुस्तक झैं स्टेपल गरे। निम्न पाठ्यक्रममा हास्य जारी थियो, र अन्य मा पनि। मसँग अझै छ। मलाई कविता पनि लेख्न मन पर्थ्यो, बरु rippy र रमाईलो को लागी। मलाई त्यो याद छ समयमा सेना मैले एउटा लेख्ने निर्णय गरें दर्शन पुस्तक। मैले करीव or० वा pages० पृष्ठहरू लेखें।
AL: पहिलो किताब के हो जसले तपाईंलाई हिर्कायो र किन?
LV: मलाई लाग्छ त्यहाँ दुई थिए: Itस्टीफन कि byले स्पष्ट कारणका लागि मलाई प्रहार गरे: कथा भयying्कर थियो, नायकहरू केटाकेटीहरू थिए जो पछि ठूलो भए ... म यो पढ्दा म जवान थिएँ, हुनसक्छ म १ 15 वर्षको भएँ। अर्को थियो अन्तहीन कथा, माइकल एंडे द्वारा। काल्पनिक, श्री कार्ल कोनराड कोरेनेडर, बास्टिन बालटासर बक्स, अत्रेयु, फजुर, Áuryn, शिशु सम्बन्धी महारानी, ​​दुई रंगीन पाठको प्रिन्टि a, एक कथा जसले अन्य चीजलाई खान्छ नथिंग्स फ्यान्टेसी ...
जब म यो पढ्छु, तार्किक रूपमा धेरै पौराणिक सन्दर्भ जुन मैले पछि थाहा पाएँ कि मसँग थियो, र कहिलेकाँही म यो कारणले गर्दा यसलाई पढ्ने विचार गर्दछु, तिनीहरूलाई खोज्नको लागि। तर म यो गर्न डराउँछु, ताकि मसँग पुस्तकको राम्रो स्मृति बिग्रन नपरोस्।
AL: तपाईको मनपर्ने लेखक को हो? तपाईं एक भन्दा बढि चयन गर्न सक्नुहुनेछ र सबै युगहरूबाट।
LV: ठीक छ, मलाई थाहा छैन मसँग केही छ भने, मलाई लाग्दैन। लेखकहरू भन्दा बढी, म पुस्तकहरू भन्दछु जुन मलाई साँच्चिकै मनपर्दछ। क्लासिक को, ओलिवर ट्विस्ट डिकेन्सबाट, अपराध र सजाय Dostoevsky द्वारा, मोन्टे क्रिस्टोको गणना डुमास, केहि शेक्सपियर नाटकहरू, वाउटरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे द्वारा, जेन आयर उनको बहिनी शार्लोट बाट ...
अधिक समकालीन लेखकहरू द्वारा, केही उपन्यासहरू द्वारा जोस कार्लोस सोमोजा, को जेभियर मारियास, कर्माक म्याककार्थी, जोन विलियम्स ... मैले भर्खरै पत्ता लगाए आइरिस मर्डोक, एक आयरिश लेखक जो २ 25 वर्ष पहिले मरे। उनका उपन्यासहरू धेरै घने छन र शान्तपूर्वक पढ्नुपर्दछ, तर मलाई मनपर्दछ: समुद्र, समुद्र, कालो राजकुमार, शब्दहरूको छोरा...
म पढ्न धेरै वर्ष बिताए ऐतिहासिक उपन्यासहरू, एक विधा जुन मलाई वास्तवमै मनपर्दछ (वास्तवमा, यदि म कुनै कुराको लेखक हुँ भने यो एक ऐतिहासिक उपन्यास हो)। पक्कै पनि म तिनीहरूलाई पढ्छु। मलाई त्यो विधाको क्लासिक लेखक मनपर्छ: रोबर्ट ग्रेभ्स, गिजबर्ट हेफ्स, मिका वाल्टारी वा मेरी रेनो.
तर यदि मनपर्ने लेखकहरूको मतलब भनेको मैले अधिक पढेको हो भने, म जानुपर्दछ ग्रीक: होमर, Thucydides, Herodotus, Sophocles, प्लेटो, Xenophon, एरिस्टोफेन्स… सबै कुरा ग्रीसबाट सुरु भयो।
LV: मलाई थाहा छैन, मैले यसको बारेमा सोच्नु पर्छ। यो मलाई हुन्छ तिग्लाथ असुरको नायक अश्शूरियन y रगत तारा, निकोलस गिल्ड का उपन्यासहरू। OR लारियो टर्मो de एट्रसकनमिका वाल्टारी द्वारा; वा पसल de क्लक, क्लर्कमेलभिले द्वारा। वा पनि मेंडेल, को पुस्तकहरु संग Mendelस्टीफन Zweig द्वारा।
AL: कुनै शौक जब यो लेखन वा पढ्न आउँछ?
LV: म उनीहरुलाई शौक मान्दिन, तर बानीहरू त्यसले मलाई ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ। जब म सामान्य पढ्छु वा लेख्छु मलाई मौन चाहिन्छविशेष गरी आवाजको सर्तमा; यदि मैले कुरा सुन्दै, म निरन्तर मेरो ट्र्याक गुमाउँछु र मलाई थाहा छैन कि म कहाँ जाँदैछु। त्यहाँ यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन यी सर्तहरूमा पढ्न सक्षम छन्, तर म होइन। अक्सर मैले संगीत लगाएँ लेख्न (पढ्न को लागी छैन), धेरै छोटो।
म पहिले के सुन्न चाहन्छु भनेर रोज्छु, प्रायः सँधै वाद्य संगीत (माइक ओल्डफील्ड, माइकल Nyman, केहि ध्वनि ट्र्याक, वा केवल एक गीत कि मलाई मनपर्दछ), र मैले यसलाई फेरि बारम्बार प्ले गर्न राखें, लूपमा, एक मन्त्र जस्तै। मैले एक पटक गीत सुनें कस्तो रमाइलो संसार बीचमा सुकरात र प्लेटो संग ग्रीकहरूको एक हास्यपूर्ण कथा लेख्न, एक हवाई संगीतकार द्वारा कवर लुइस आर्मस्ट्रstrong द्वारा। मैले उनीसँग एउटा कथा प्रतियोगिता जितें।
LV: यदि मैले रोज्न सक्छु भने म रातमा भन्ने थिएँ, तर सामान्यतया म पढ्छु वा लेख्छु जब म सक्छु। सबवे प्लेटफर्महरूमा (शोरका बाबजुद; त्यसो भए म पढेको कुरा पढ्नु पर्छ वा के लेखिएको हो समीक्षा गर्नुहोस्), खाजाको समयमा, दिउँसो, ओछ्यानमा ... सबै यो तपाइँसँग भएको समयमा निर्भर गर्दछ.
AL: हामी के पाउँछौं अलेक्ज्याण्डर माथि आकाश?
LV: ठीक छ, यदि शीर्षक अन्यथा देखिन्छ भने, जसलाई हामी भेट्दैनौं, वा हामी थोरै भेट्छौं, सिकन्दर हो, अलेक्ज्याण्डर महान्। उनी को हुन् भनेर चिन्न नसक्नेहरूका लागि अलेक्ज्याण्डर एक म्यासेडोनियाका राजा थिए जसले २२ वर्षको उमेरमा विशाल फारसी साम्राज्यलाई कब्जा गर्न गएका थिए र १० बर्षमा उनले पूर्वी भूमध्यसागरदेखि भारत र डेन्यूब नदीसम्मको भूमि ओगटे। रातो समुन्द्र। उसको विजयले संसारलाई सदाको लागि परिवर्तन गर्यो। तर उपन्यासले त्यसो गर्दैन va कि विजय को, तर यस यात्रामा अलेक्ज्याण्डरसँगै आएका ग्रीकहरूको कष्टको: एक निश्चित ओनेसक्रिटसउनको नाम जत्तिको जटिल भएको कारण यो उनको जीवन थियो किनकि उनी म्यासिडोनियाका राजाको वरिपरि बनेको अनौंठो योजनामा ​​संलग्न थिए।
यो प्रयोग गर्न ऐतिहासिक उपन्यास होइन, यस अर्थमा कि हो, त्यहाँ रोमांच छन्, तर विशिष्ट वीर महाकाव्य देखा पर्दैन त्यो सामान्यतया विधाको साथमा हुन्छ, न त लामो युद्ध दृश्यहरू (यद्यपि त्यहाँ लडाईहरू छन्), न त धेरै राम्रा वा धेरै नराम्रा चरित्रहरू। जीवनमा कोही पनि कालो वा सेतो छैन, हामी सबै खैरो छौं, र यो उपन्यासको बारेमा हो, यद्यपि यो २ 2300०० वर्ष पहिलेको एक सेटिंगमा सेट गरिएको छ (वास्तवमा, कुनै पनि पात्रहरू "र able देख्न सक्षम छन्) "जनताको)। मलाई लाग्छ उपन्यास हास्य को एक बिन्दु छ कि म आशा गर्छु कसैले पक्रन्छ, y धेरै अर्को प्रतिबिम्ब, किनकि पात्रहरूले आफ्नो जीवन आफ्नो भाग्य प्रतिबिम्बित गर्दछन्।
AL: तपाईलाई मन पराउनु भएको कुनै अन्य विधाहरू?
LV: यदि केहि छ पौराणिक, तर केवल जब उनीहरूले मलाई भन्छन् ती मिथकहरूमा स्थिर रहन्छ। जब धेरै चीजहरू मिसिन्छन् जुन मलाई फिट गर्दैनन्, वा यसमा मिथ्याको मिल्दो भन्दा बढी कल्पनाहरू यसमा फ्याँकिएको हुन्छ, म यो सहयोग गर्न सक्दिन र बिच्छेदन गर्न सक्दिन। मलाई दर्शन पढ्न मन पर्छ, मलाई लाग्छ कि (वा धन्यवाद) त्यो डिग्री अध्ययन गरेको कारण। मैले सुपरहिरो कमिक्स पढ्न मन पराउँनु अघि; मलाई थाहा छैन यदि त्यो लि gender्गको रूपमा गनिन्छ।
LV: म एक साथ छु लुसियानो क्यान्फोरा द्वारा निबन्ध, एक इटालियन इतिहासकार र फिलोलॉजिस्ट, जो शीर्षक छ यूटोपियाको स्कट. प्लेटोको बिरूद्ध एरिस्टोफेनेस। मलाई यो धेरै मन पर्छ। यो ती पुस्तकहरू मध्ये एक हो जुन तपाईं रेखांकित गर्न चाहानुहुन्छ वा नोटहरू लिन चाहनुहुन्छ र तपाईंलाई अन्य चीजहरू पढ्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। को रूपमा लेख्नुहोस्, मसँग एउटा छ ईसापूर्व XNUMXth औं शताब्दीको शुरूदेखि ग्रीसको इतिहास। सी हामी यो हेर्नेछौं कि यो राम्रोसँग अन्त्य भयो कि भएन।
AL: तपाइँ कसरी सोच्नुहुन्छ कि प्रकाशन दृश्य धेरै लेखकको लागि छ वा त्यहाँ प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ?
LV: त्यहाँ धेरै लेखकहरू छन्, हो, र मैले आफैलाई प्याकेजमा समावेश गर्दछु। यो पुस्तक प्रकाशित गर्न गाह्रो छ, त्यसैले किन यो सबैको लागि रोजगार पाउन गाह्रो छ: त्यहाँ धेरै आपूर्ति, धेरै लेखक, र थोरै माग छ। प्रकाशकहरूको स्क्रीन पर्दछ र थोरै ज्ञात नामहरू प्रकाशन गर्न जोखिम गर्दैन, यद्यपि यो सत्य पनि हो कि कोहीले नयाँ लेखकहरू वा भर्खर सुरु गरेका व्यक्तिहरूको छनौट गर्छन्; तर फेरि समस्या यो हो भीडभाड। तपाईं राम्रो वा खराब लेख्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै पटक यो भाग्य हो कि तपाईं प्रकाशक भेट्टाउनुहुन्छ कि निर्धारित गर्दछ।
La डेस्कटप प्रकाशन यो समस्याबाट बाहिर निस्किने तरिका हो: यदि तपाईंसँग प्रकाशक छैन भने तपाई आफैले प्रकाशित गर्नुहुन्छ र के हुन्छ हेर्नुहोस्। कमसेकम तपाईको प्रकाशित पुस्तक अवलोकन गर्ने सपना पूरा भइसकेको छ। र वास्तवमा, प्रकाशकहरू कहिलेकाँही अमेजन जस्ता पोर्टलहरूमा जान्छन् लेखकहरूको खोजीमा जसले स्वयं प्रकाशित गरेका छन् र सफल भइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हस्ताक्षर गर्न। मार्कोस चिकोट, केहि वर्ष अगाडि ग्रह पुरस्कारका लागि फाइनलिस्ट, या जेभियर कास्टिलो, वा डेभिड बी गिल, त्यो भाग्यशाली थिए।
AL: के हामीले सामना गरिरहेका संकटको क्षण तपाईंको लागि गाह्रो भइरहेको छ वा के तपाईं कुनै सकारात्मक चीजको साथ रहन सक्षम हुनुहुनेछ?
MF: व्यक्तिगत रूपमा म भाग्यशाली छु; मेरो पारिवारिक वातावरणमा त्यहाँ कोभिडको कुनै संकुचन भएको छैन, र कामको स्तरमा मैले यो पनि लगभग एक बर्षमा ह्यान्डल गरें कि हामी महामारीको कुवा रहेछौं। तर यो स्पष्ट छ कि परिस्थिति नाजुक छ, र धेरैको स्वास्थ्य र कामका लागि दुबै समय अत्यन्त खराब भएको छ। मेरो विचारमा सामाजिक जागरूकता को अभाव छ, हामी फेरि महामारीको शुरूदेखि नै जागरणको अभावका कारण उही ढु stone्गामा ठक्कर खाइरहेका छौं। अस्पतालहरू बिरामीहरूसँगै पतन भयो, बाहिरी रोगी क्लिनिकहरू कामले ओभर फ्लो भयो ... र धेरैले अझै समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिदैनन्।
यदि म सकारात्मक केहि संग रहन सक्छ? ठिक छ, किनकि हामी किताबहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं, म खुशी हुन सक्दछ किनकि २०२० मा मैले प्रकाशित गरें अलेक्ज्याण्डर माथि आकाश र अरू केहि। म अवश्य नै छु, तर म डराउँछु कि भाग्यले उत्तम वर्षको छनौट गरेन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » लुइस भिल्लान। एल सिलो सोब्रु एलेजेन्ड्रोको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
Javier Cercas का किताबहरु
जेल डिकर द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू